Xaqiiqooyin layaab leh oo aadan horay u maqlin (Barnaamij cusub) qeybtii 2aad. – Filimside.net
Xaqiiqooyin layaab leh oo aadan horay u maqlin (Barnaamij cusub) qeybtii 2aad.
Kusoo dhawaada barnaamijkeena cusbaa qeybtiisa 2aad kaasoo taxane inoo noqon doono maalinkasta anagoo idiinkugu soo gudbin doono waxyaabaha ama xaqiiqooyinka layaabka leh ee aduunkaan ka jiraan kuwaas oo aad u baahantahay inaad wax badan ka ogaatid.
7-ma ogtahay in ubaxa loo yaqaano Halfeti inuu yahay ubax nadir ah.
Midabkiisa wuxuu isbadalaa hadba cimiladii lagu jiro.
Xiliga deyrta wuxuu yeeshaa midab guduud ah.
Xiliga gugana wuxuu yeeshaa midab Basfanji ah.
Xiliga xagaagana wuxuu yeeshaa midab madow ah.
Intaas waxaa u sii dheer in ubaxaan uu aduunka hal meel oo kaliya ka baxo waana tuulada loo yaqaano Halfeti oo Turkiga ku taalo, isku day kastaa oo lagu doonayay in meel kale looga abuurana wuxuu ku dhamaaday fashil.
8-ma ogtahay in hadii qofka insaanka ah uu naftiisa la sheekeysto waliba cod dheer kula sheekeysto aysan ka dhigneen inuu waalanyahay hase yeeshee waa howl ay maskaxda u baahantahahay mararka qaar si ay u turjunto afkaarteeda.
Daraasaad kastaa oo la sameeyay waxay cadeeysay in sheekada uu qofka la sheekeysto naftiisa ay tahay arin wanaagsan isla markaasna muujineyso in qofka caqligiisa korayo isla markaasna uu awoodo inuu waxkasta xal u heli karo.
9-hadii aad ku gubato dab, ama saliid kulul ama biyo kulul waxaad gacanta dhex gashataa ama qofka gubtay gacanta u marisaa bur biyo lagu qasay ilaa qofka uu xanuunka ka daayana ha u marsanaado.
Baaritaankaan oo aan aniga xitaa tijaabiyay waa mid sax ah 100% intaas waxaa usii dheer qofka xanuunka oo ka fuqo iyo meeshii gubatay oo nadiif sideeda caadiga ahaato wax gubniin ahna laga dareemin.
10-digniin dhibicda guduudan ee ku sawiran qolofka shukulaatada wuxuu u taaganyahay muslimiinta waa ka mamnuuc sabab la xiriirta in laga sameeyay saliida xayawaanka doofaarka.
11-xitaa hadii qaabka muuqaalkaada qurux badneen hase yeeshee aad soo carfeyso caraftaadana heer sare tahay ogow dadka iney kuu arkayaan mid qurux badan.
12-ma ogtahay in dhakhtarka la yiraahdo Saciid Al-qaxdhaani uu yahay dhakhtar sacuudiyaan ah, waxaana dhacday hada kahor in loo wacay kadib markii ay soo baxday camaliyad dag dag ah oo qof dhaawac halis ah soo gaaray larabay in lagu sameeyo.
Dhakhtarkii ayaa waqtigii loogu talo galay inuu ku imaado kasoo dib dhacay mudo daqiiqooyin ah taasoo kaliftay in aabaha wiilkii dhaawaca ahaa uu six un u caayo dhakhtarkii asigoo ku dhahay “hadii wiilkaaga ahaan lahaa qofka saalada qaliinka saran marnaba masoo daahdeen”
Hase yeeshee dhakhtarkii markii uu qaliinkii ku guuleystay ninkii wiilka dhalay wuxuu ogaaday in dhakhtarka uu kasoo tagay janaasada wiilkiisa si uu u badbaadiyo wiilkaan qaliinka u baahan.
Dagdagta marnaba ma fiicna.
La soco qeybta sadaxaad barnaamijkaan xiisaha leh.
Haddii aadan aqrisanin qaybtii kowaad barnaamijkaan fadlan RIIX HALKAAN